सिमेन्ट र छड उद्योगले घटाए उत्पादन - Aarthiknews
सिमेन्ट र छड उद्योगले घटाए उत्पादन
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टबाट उत्पादन भएको १ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट अहिले गोदाममै थन्किएको छ । दैनिक १० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हेटांैडा उद्योगले अहिले उत्पादन घटाएर प्रतिदिन ४ हजार बोरामा सीमित बनाएको छ । यही स्थिति निजीक्षेत्रका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूको पनि छ । निजीक्षेत्रका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू शिवम्, अर्घाखाँची, कसमस, अग्नि, जगदम्बा लगायतले पनि आफ्नो उत्पादनलाई कटौती गरेका छन् ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेपछि अहिले पूर्वाधार निर्माणका मुख्य सामग्री सिमेन्ट र छडको खपत ≈वात्तै घटेको छ भने निर्माण सामग्रीमा ‘प्राइसवार’ चलिरहेको स्थिति छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य घटेर ५० केजी बोराको औसतमा पीपीसीको रू. ५५० र ओपीसीको रू. ६५० मा झरेको छ । विगतको तुलनामा यो मूल्य ५ देखि ६ प्रतिशत कम हो ।
त्योसँगै, पूँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधनले आयोजनाको म्याद थप गरेअनुसार कार्यान्वयन नभएको र ‘बैंक क्रेडिट लाइन’ लगायत विषयमा संशोधन उनीहरूको माग रहेका छन् ।
आरएमसी ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालका अनुसार अर्थतन्त्रमै समस्या आएको र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अहिलेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगहरूले औसत ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन घटाएका छन् । अहिले नै बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आइनसकेको तर यस्तै अवस्था रहे अबको १÷२ वर्षमा ठूलो समस्या
आउने उनले बताए ।
मागभन्दा उत्पादन बढी भएको हालको अवस्थामा पनि ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू होङसी शिवम्, अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतले केही सयमयता क्षमता विस्तार गरे भने रिद्धिसिद्धि, सम्राट, प्युठान, पाल्पा लगायत नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए । नेपाल सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघका अनुसार हाल सिमेन्टको खपत वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन रहेको छ भने वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ४० लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डा. ताराप्रसाद पोखरेल पनि अहिले सिमेन्टको माग साविकभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको स्वीकार्छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।